पुष्पलालको पालाको विद्यार्थी संगठन क्रान्तिकारीमा समाहित – Janaubhar
पुष्पलालको पालाको विद्यार्थी संगठन क्रान्तिकारीमा समाहित
प्रकाशित मितिः बिहिबार, पुस २०, २०७४ | 449 Views ||
नेकपा संयुक्तको भातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेशन माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीमा विलय भएको छ । नेकपा संयुक्त चुनावअघि नै माओवादीमा मिसिएको थियो ।
फेडेरेशन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनासँगै गठन भएको देशकै पूरानो विद्यार्थी संगठन हो ।
यसैगरी सोही एकता कार्यक्रममा विप्लव निकटको अखिल (क्रान्तिकारी)का सचिव रामवहादुर विक र कोषाध्यक्ष आस्था घिमिरेसहितको समूह अखिल (क्रान्तिकारी)मा समाहित भएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद जोशीसहितको समूह अखिल (क्रान्तिकारी)मा समाहित भएको छ । सोही कार्यक्रममा वैद्य निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का ६ नं. प्रदेशका संयोजक जगदीश शाहीसहितको टोली पनि क्रान्तिकारीमा समाहित भएको थियोे ।
एकता घोषणा कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिवालय सदस्य एवं क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने, पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्ल र पोलिटव्यूरो सदस्य पदमराज जोशी लगायतको सहभागिता रहेको थियोे।
के हो फेडरेशनको इतिहास ?
२००६ सालमा पुस्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भयो । त्यस लगत्तै प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरु संगठित भए ।
गठन भएको संगठनको नाम अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशन प्रस्ताव गरियो ।
फेडेरेशनलाई १७ असार २००७ मा औपचारिकता दिएर नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन (नेराविफे) राखिएको थियो ।
२००७ लाई नै नेपालको पहिलो विद्यार्थी मञ्चका रुपमा रेहेको फेडेरेशनले आधिकारिकता पाएको हो ।
समाजवादी शिक्षा अंगिकार गरेको प्रगतिशील विद्यार्थीहरुको संगठन भए पनि अरु कुनै विद्यार्थी संगठनको स्थापना नभएकोले फेडेरेशन नै विद्यार्थीको साझा मञ्चको रुपमा रहेको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीसँगै स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा जेठो विद्यार्थी संगठन नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेशन अब भने इतिहासमै सीमित भएको छ ।
कम्युनिष्टहरुको टुटफुटसँगै बनेको नेकपा संयुक्त निकट रहेको नेराविफे बुधबार औपचारिक रुपमा माओवादी केन्द्रको अखिल (क्रान्तिकारी)सँग मिसिएपछि इतिहासमै सीमित भएको हो ।
माओवादी नेकपा संयुक्त र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेकोले नेराविफे पनि क्रान्तिकारीमा मिसिएको हो ।
नेराविफेः दिल्ली सम्झौताको विरोधदेखि स्ववियु स्थापना
२००६ सालमै संगठित भएपछि १७ असार २००७ लाई आधिकारिकता मानिएको नेराविफेको इतिहास विद्यार्थी आन्दोलनमा गर्विलो छ ।
२००७ सालमा तत्कालीन राजदरबार, नेपाली कांग्रेस र दिल्लीबीच भएको दिल्ली सम्झौता धोकापूर्ण भएको भन्दै भण्डाफोर गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै २००८ सालमा फेडेरेशनको पहिलो सम्मलेन भएको थियो । जसबाट बासुदेव ढुंगाना अध्यक्ष बने ।
उक्त सम्मेलनबाट पनि फेडेरेशनको नाम नेराविफे नै राखेर समाजवादी विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएको थियो । ‘विद्यार्थीको साझा मञ्चका रुपमा रहेको फेडेरेशनको पहिलो सम्मेलन २००८ मा भएको हो,’ एकतामा आएका नेराविफेका अध्यक्ष दिपक जोशीले इतिहास सम्भिmदै भने, ‘बासुदेव ढुंगाना अध्यक्ष बन्नु भएको थियो ।’
०२२ सालसम्म नेपालमा विद्यार्थी संगठनका रुपमा यही नेराविफे मात्रै थियो । जसले सोही वर्ष स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापनासमेत गरेको हो ।
त्यसपछि भने नेराविफेबाटै २०२२ अनेरास्ववियुको जन्म भयो । अनेरास्ववियु नै पुस्पलाल निकट बन्यो ।
प्रगतिशील विद्यार्थीहरुको मात्रै संगठन भए पनि जनवादी शिक्षा नमान्ने भन्दै प्रजातान्त्रिक धारका विद्यार्थीहरुले नेपाल विद्यार्थी संगठनको स्थापना गरे ।
०२७ सालमा नेराविफे स्थापना भएको २० वर्षपछि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संगठन स्थापना भएको थियो । ‘नेराविफेले नै ०२२ सालमा स्ववियु स्थापना गरेको हो,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘पछि ०२२ सालमा नेराविफेबाटै अनेरास्ववियु गठन भयो, अनेरास्ववियु पुष्पलालतिर लाग्यो, नेराविफे पनि आन्दोलनमै थियो, नेविसंघ त ०२७ मा स्थापना भएको हो ।’
Prevवालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक सुरु
Nextराष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ २४ मा